Beauty – စာမကျြနှာ6– Healthy Life Journal
အာရှလှပျိုဖြူတို့၏ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက်ရှစ်ရပ်
အာရှလှပျိုဖြူတို့၏ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက်ရှစ်ရပ် ၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အာရှလှပျိုဖြူအများစုက သူတို့ရှိ ရင်းစွဲအသက်ထက် အများကြီး နုပျိုကြည့် ကောင်းတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနုပျိုတဲ့ အာရှလှပျိုဖြူတွေက ဘယ်လိုအသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်းတွေကို လိုက်နာလေ့ရှိသလဲဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ (၁) မျက်နှာသစ်သည့်အခါ...
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ လိုအပ်သောပစ္စည်းများ – အညိုပုပ်ရောင် နှုတ်ခမ်းနီ – အိုင်းလိုင်နာ အရည် – မျက်ခုံးဆွဲ ခဲတံ – အစိမ်းရောင် မျက်ကပ်မှန် – အညိုဖျော့ရောင် အိုင်းရှဲဒိုး ခပ်လန်းလန်း မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်တတ်တဲ့ ရီဟားနားလို...
ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး လှပကျစ်လျစ်စေမည့် အိမ်တွင်းနည်းများ
၊ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကလူတွေဟာ ကော်ဖီအရသာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်တိုင်း ကော်ဖီမှုန့်ကိုနှပ်ပြီး ကော်ဖီသောက်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကြွင်းကျန်ခဲ့တဲ့ ကော်ဖီမှုန့်အနှစ်သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပုံမှန်ကော်ဖီမှုန့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုတတ်ရင် သင့်ကို ခေါင်းအစ ခြေအဆုံးလှပပြီး သွယ်လျအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆဲလူးလိုက်အဆီ ကော်ဖီမှုန့်ကို ဆားနဲ့ရောပြီး...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကျောင်းမှာ၊ အလုပ်မှာ ရေပန်းစားတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အားကျနေပါသလား၊ လူအများချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သဘောကျမိပါသလား။ သင်အားကျနေတဲ့ သူတွေက တခြားသူတွေထက် ထူးကဲတဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ မဟုတ်ဘဲ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ စိတ်ခွန်အားကြောင့် ပိုမို...
ပျိုမေတို့မဖြစ်မနေသိသင့်သည့် ထိပ်တန်းမော်ဒယ်တို့၏ အလှအပရေးရာ နည်းလမ်းများ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အသားအရေလှပပြီး စတိုင်ကျ ကြည့်ကောင်းတဲ့ ထိပ်တန်းမော်ဒယ် တွေဆီက အသုံးဝင်တဲ့ အလှအပရေးရာ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဂျီဂျီဟေဒစ် “ကျွန်မအမေက ညဆိုရင် ၀က်ခြံတွေပေါ်မှာ သွားတိုက်ဆေးတို့ထားဖို့ အမြဲ သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း တခြားနည်းတွေ...
မီးဖိုချောင်ထဲက အသားအရေနှင့် ဆံကေသာထိန်း ပစ္စည်းများ
၊လရိပ်မေ၊ အသားအရေနဲ့ဆံကေသာကို ဓာတုပစ္စည်းမပါတဲ့ သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ သဘာဝကျကျလှပအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ရာအတွက် မီးဖိုချောင်ကို အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ – ဂျုံမှုန့်အကြမ်း ဘာအတွက် ကောင်းသလဲ ဂျုံမှုန့်အကြမ်းကို မွှေစက်ထဲမှာ အမှုန့်တွေ ဖြစ်တဲ့အထိ ကြိတ်ချေပြီး ချိုးရေထဲမှာ ထည့်ကာ ရေချိုးရင်း ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ နှင်းခူနဲ့...
ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်အရွယ်မဆို တင့်တယ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်း
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေက ဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက် လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ လန်းဆန်းပျိုမြစ်တဲ့အသားအရေကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ်။ – အရသာခံရုံသာ အရက်သောက်ခြင်း လူအများစုက လူမှုရေးအရ လူမှုရေးအရ ဆိုပြီး အရက်သောက်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရက်စွဲလာ ပါတော့တယ်။ အရက်ကို အလွန်အမင်းသောက်တာကြောင့်...
၊ လရိပ်မေ ၊ မိန်းကလေးကြီးငယ်မရွေး သုံးစွဲလေ့ရှိကြတဲ့ အခြေခံအလှကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။ Toner မျက်နှာသန့်စင်ပြီးချိန်မှာ လိမ်းရတဲ့ တိုနာရည်ဟာ အရေပြားရဲ့ သဘာဝ စံဓာတ်ကို ထိန်းပေးပါတယ်။ တချို့သန့်စင်ဆေးတွေကြောင့် အရေပြားရဲ့ စံမျှခြေပျက်ပြယ်သွားပြီး အသားအရေ ခြောက်သွေ့တာနဲ့ မာတင်းတာတို့...
အရွယ်တင် နုပျိုမှုအတွက် အခြေခံကျသော အချက်
အရွယ်တင်နုပျိုမှုရဲ့ အခြေခံကျတဲ့ အချက်ကို လေ့လာမှုတွေက ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အခါ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုဟာ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျော့ကျသွားရင်တောင် အိုမင်းမှုကို ခံစားရစေပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ထက်မြက်ဖို့အတွက်၊ အသားအရေချောမွေ့လှပဖို့အတွက်၊ ကျန်းမာရေးပိုကောင်းဖို့အတွက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အရည်လှုပ်ရှား မှုရှိဖို့အတွက် ရေကိုလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ရေများများသောက်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းက နုပျိုချင်သူတွေလိုက်နာသင့်တဲ့နည်းပါ။ ကိုယ်စားသောက်တဲ့...
သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် မိတ်ကပ်လိမ်းရာတွင် . . .
မေး. သက်လတ်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေက မိတ်ကပ်လိမ်းရာမှာ ဘယ်လိုအချက်တွေကို ဂရုစိုက်သင့်ပါသလဲ။ ဒေါ်လွင်လွင်မာ၊ ကျောက်တံတား။ ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်- – လေအေးစက်နဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာ အမြဲနေရတဲ့သူတွေက အရေပြားခြောက်သွေ့တတ်လို့ အစိုဓာတ်ဖြည့်ခရင်မ်ကို မိတ်ကပ်အောက်မှာ ခံလိမ်းသင့်ပါတယ်။ –...